Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၃၈ ဦးထိမြင့်တက်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ် ဖလော်ရက်စ်တင်မူခရိုင်တွင် ရေကြီးမြေပြိုမှုအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး(SAR) ဝန်ထမ်းများက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)	Asia
အရှေ့ဖလော်ရက်စ်ခရိုင်တွင် ၆၇ ဦး၊ လမ်ဘာတာခရိုင်တွင် ၃၂ဦး၊ အာလော်ခရိုင်တွင် ၂၅ ဦး၊ မာလာကာခရိုင်တွင် ၄ ဦး၊ ကူပန်ခရိုင်တွင် ၅ ဦး ၊ ဆာဘူရိုင်ဂျွာခရိုင်တွင် ၂ ဦး၊ အန်ဒဲခရိုင် ကူပန်မြို့ နှင့် နဂါဒါခရိုင်တို့တွင် တစ်ဦးစီ အသီးသီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီအကြီးအကဲ Doni Monardo က ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ် ဖလော်ရက်စ်တင်မူခရိုင်တွင် ရေကြီးမြေပြိုမှုအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး(SAR) ဝန်ထမ်းများက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ လမ်ဘာတာ နဲ့ အာလော်ခရိုင်တွေမှာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်ရတာ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေအတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကြီးစား မြေတူးစက်တွေနဲ့ထရက်စ်ကားတွေကို အသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်နေရပါတယ်” ဟု Monardo က ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မိုးလေဝသ၊ ရာသီဥတုနှင့် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာအေဂျင်စီက အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ Savu ပင်လယ်ထဲတွင် ဧပြီ ၅ ရက်က အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည့် အပူပိုင်း Seroja မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း ၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း နှင့် ၆ မီတာ ခန့်ရှိသည့် ပင်လယ်ဒီလှိုင်းမြင့်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့် ဆိုးရွားသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ဆို
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမြေပြိုမှုအတွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးသွားမြင်ကွင်းတစ်ခုအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လက်ရှိတွင် Seroja မုန်တိုင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားပိုင်နက်အတွင်းမှ အပြင်ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေသော်လည်း နိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ်အများအပြားတွင် လာမည့် ရက်အနည်းငယ်ထိ မုန်တိုင်းသက်ရောက်မှုကို ဆက်လက် ခံစားရအုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဘာလီ ၊ အနောက်နျူဆာတန်ဂါရာ ၊ အရှေ့ဂျာဗား ၊ ယိုရာကာတာ နဲ့ အလယ်ဂျာဗား ပြည်နယ်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည်ရမှာပါ ” ဟု အေဂျင်စီအကြီးအကဲ Dwikorita Karnawati က ဆိုသည်။
Seroja မုန်တိုင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ၁၀ လုံးမြောက် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်သည် ။ သို့သော် ၎င်း၏ အရှိန်ကြောင့် မြေပြိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည် အဆိုးရွားဆုံးသဘာဝ ဘေးဒဏ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
(1-2) Members of Search and Rescue (SAR) team evacuateavictim of flash floods and landslides in Flores Timur district, East Nusa Tenggara, Indonesia. (Basarnas in Maumere/Handout via Xinhua)
3- Photo taken on April 4, 2021 shows the damage of flash flood and landslide in East Nusa Tenggara, Indonesia. (BNPB/Handout via Xinhua)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံထုတ် မီးရထားသံလမ်းများ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ စီမံကိန်းနေရာသို့ ရောက်ရှိ
Next Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှု၊ မြေပြိုမှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၁၁၇ ဦးအထိမြင့်တက်လာ